हत्या अभियोगमा कंगोका तीन चिकित्सक पक्राउ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ हत्या अभियोगमा कंगोका तीन चिकित्सक पक्राउ
हत्या अभियोगमा कंगोका तीन चिकित्सक पक्राउ
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७६ साउन २७ गते, १४:०७ मा प्रकाशित
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का एक चिकित्सकको हत्यापछि प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोका तीन चिकित्सक पक्राउ परेका छन् । इबोलाका बिरामीको उपचारमा संलग्न डा. रिचार्ड मोउजोकोलाई यही अप्रिलमा बुटेम्बोस्थित एक अस्पतालमा गोली प्रहार भएको थियो । छातीमा गोली लागेका मोउजोको तत्कालै मृत्यु भएको थियो । उनी आफ्नो पेसाप्रति प्रतिबद्ध र इमान्दार रहेको डब्लुएचओद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अभियोजनकर्ता जीन बापटिस्ट खुम्बुले घटनामा जोडिएको आरोपमा तीन जना चिकित्सक पक्राउ परेको बताए । उनीहरुमाथि अपराधिक षडयन्त्र गरेको अभियोग लगाइएको छ । आक्रमणकारीको तीब्र खोजी भइरहेको खुम्बुले जानकारी दिए ।चिकित्सकमाथि देशमा हिंसा मच्चाइरहेका सशस्त्र समूहले धम्की दिदै आएका छन् ।
मोउजोको हत्या गर्नुको कारण खुलेको छैन । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा इबोलाका कारण गत वर्ष मात्र १८ सय भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । डा. कंगोमा सर्बप्रर्थम १९७६ मा इबोला भाईरस देखिएको थियो । इबोलाले अहिलेसम्म पश्चिम अफ्रिकी मुलुक गिनीअ, लाईबेरिया र सियरा लियोनमा २८ हजार ६ सय १६ को मृत्यु भइसकेको छ ।